Ihe mgbaze dai
Eriri & Textile
Ngwakọta Ngwakọta Metal
Ihe osise na mkpuchi
Mgbaze Yellow 114
Mgbaze Violet 59
Agba odo 180
Uhie Red 149
Ihe mgbaze violet 13
Anyị na-enye ihe karịrị otu narị mono-masterbatches iji gboo mkpa gị. Ahaziri chọrọ na-akwado ka anyị nwere ọtụtụ puku agba na nchekwa data anyị.
Isi ihe / resin: Pee, eyi, ABS, PITA, plastic wdg
Agba: Red, Blue, Yellow, Green, violet, wdg.
Ngwa: Ọgwụ na ịkpụzi, Fụọnụ Nkedo, Extrusion, Fụọnụ Nkiri, Mpempe akwụkwọ, PP filament, PP Staple fiber and BCF Yarn, Non-kpara akwa wdg
A na-ahọrọ masterbatches anyị site na ndị nwere agba nwere ogo na arụmọrụ.
Ngwa gụnyere ịkpụzi, ihe nkiri na filament, eriri, yarn BCF na akwa ndị na-abụghị kpara.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịmepụta masterbatches ndị a na - emezi nwere ọrụ pụrụ iche dị iche iche dịka nkọwa gị na ihe ị chọrọ.
JC2020B na-eji maka gbazee-igbu nonwoven akwa, na kwa SMMS, SMS, wdg N'ihi ya magburu onwe nzacha mmetụta, ikuku permeability, mmanụ absorption na okpomọkụ ichebe, ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke ọgwụ na ahụ ike nchebe, sanitary ihicha ihe, filtration ihe , thermal flocculation ihe, mmanụ absorption ihe na batrị separator, wdg
A na-eji ya iji nweta arụmọrụ dị elu nke Meltblown Non-Woven, nke bụ maka nkpuchi ihu (ya na FFP2 mask filtration).
JC2020 a na-eji dịkwuo adsorption ike nke electric ebubo na meltblow na-abụghị kpara.
Ọ na - enyere aka mee ka nzacha nzacha izugbe na nrụrụ ọkụ nke meltblow na - abụghị kpara mgbe ọ dị mma na gram.
Uru ya bụ na ọ na - enyere aka ịbawanye arụmọrụ nhicha na 95% na eriri mma na grammage. Ọzọkwa, ọ dịghị mmetọ na-enweghị mmerụ ahụ na igwe.
Mgbaze Blue 122
Ihe mgbaze Blue 122 bụ ọchịchịrị ọbara ọbara ọbara ọbara-acha anụnụ anụnụ ihe mgbaze dai. Ọ bụ nke ezigbo okpomọkụ na-eguzogide na ìhè ngwa ngwa, ezi Mbugharị eguzogide na elu tinting ike na mbara ngwa. Ukwuu na-atụ aro maka polyester eriri PET eriri, na-ekwe ka-eji maka injinịa plastik. A na-eji ya eme ihe na PS PET PA PC ABS (polyolefin, polyester, polycabonate, plastics).
Okike ya bụ Filester 2RA, Polysysthren blue R.
Anyị nwere ike ịnye ihe mgbaze Blue 122 SPC na mono-masterbatch.
Mgbaze violet 13 bụ bluish violet mmanụ mgbaze dai. Mgbaze Violet 13 nwere ezigbo ngwa ngwa, ezigbo nguzogide ọkụ na nguzogide mbugharị na agba agba.
Ihe mgbaze nke Violet 13 bụ Macrolex Violet B.
A na-akwado ihe mgbaze violet 13 maka PET PC ABS plastik (polyolefin, polyester, polycabonate). Enwere ike iji ya na fiber polyester (PET).
Mgbaze Red 135
Mgbaze Red 135 bụ acha uzo uhie mmanụ ihe mgbaze dai. Ọ bụ nke ezigbo okpomọkụ na-eguzogide na ìhè ngwa ngwa, ezi Mbugharị eguzogide na elu tinting ike na mbara ngwa.
Okike ya bu Macrolex Red EG, filester red GA.
A na-akwado ihe mgbaze Red 135 maka PS PET PA PC ABS (polyolefin, polyester, polycabonate, polyamide, plastic). Enwere ike iji ya na eriri polyester (PET).
Anyị nwere ike ịnye Mgbaze Red 135 SPC na mono-masterbatch.
Mgbaze Red 179
Mgbaze Red 179 bụ ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie. Mgbaze Red 179 nwere ezigbo nguzogide ọkụ na ọkụ ọkụ, ezigbo nguzogide mwepụ na ike dị elu.
Ihe mgbaze Red 179 bụ Red E2G.
A na-akwado ihe mgbaze Red 179 maka plastik, PS PET PA PC ABS (polyolefin, polyester, polycabonate, polyamide) wdg.
Na-ekwe ka a ga-eji na polyester eriri (PITA).
Agba Blue 60
Agba Blue 60 bụ ezigbo mma -acha anụnụ anụnụ na-acha ọbara ọbara ndo, ink Blue 60 nwere magburu onwe ìhè na-eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide Njirimara na ezi ihu igwe fastness.
Nha ya bu Blue A3R / Blue RSN, Vat Blue 4 nkpuru (eji ya na terylene cotton T / C polyester-cotton dye).
A na-atụ aro Pigment Blue 60 maka eriri polyester (PET / terylene), PA fiber (chinlon), fiber polypropylene (fiber PP), mkpuchi ụgbọ ala, PP HDPE PVC PS PET PA Plastic na injinị plastik.
Mgbaze Yellow 114 bụ ihe na-acha odo odo na-acha odo odo. Ọ bụ nke ezigbo okpomọkụ na-eguzogide na ìhè na-eguzogide, ezi Mbugharị eguzogide na elu tinting ike na mbara ngwa. Na-agba agba maka plastik, PS PET ABS PC (polyolefin, polyester, polycabonate) plastik, fiber na ink ink.
Ihe ogugu ya bu YELLOW 2G, YELLOW GS, YELLOW G.
Mgbaze Yellow 114 makwaara dị ka ịgbasa edo 54 maka ink, inkjet ink.
Oje oroma 64 bụ oroma na-acha ọbara ọbara nke nwere mmetụ dị elu, nke nwere oke ọsọ ọsọ maka acid, alkali, mmiri, mmanụ, ọkụ na nguzogide ihu igwe dị mma, nguzogide ọkụ na ọkụ ọsọ ọsọ, arụmọrụ mbugharị ntụgharị zuru oke.
Ogologo ya bu oroma H2GL / ORANGE GL / ORANGE 2960 MP / ORANGE GP-MP.
A na-ahapụ ya ka eji ya na PP PE ABS PVC plastik, mbipụta na mkpuchi, yarn BCF na eriri PP. Anyị na-enyekwa Pigment Oroma 64 SPC na mono-masterbatch.
Agba odo odo 23
Agba odo odo 23 bụ odo odo na-acha odo odo nwere ike ime ihe dị elu. Ya nwere nguzogide ọkụ dị mma, njiri nguzo ọkụ na ezigbo ngwa ngwa ihu igwe.
Ihe nha anya ya bu Violet RL.
A na-akwado violin violet 23 maka eriri polyester (PET / terylene), PA fiber (chinlon), eriri polypropylene (eriri yarn BCF), PP PE ABS PVC PA Plastic na injinị plastik.
Anyị na-enyekwa pigmenti violet 23 SPC na mono-masterbatch.
Achọsa Violet 57
Achụsasị Violet 57 bụ ihe na-egbuke egbuke na-acha ọbara ọbara na-acha odo odo. Ọ nwere ezigbo ngwa ngwa, nguzogide ọkụ dị mma na nguzogide mpụga na agba agba. Ọ na-egosi oke nghọta mgbe ị na-eji ya na HIPS na ABS.
A na-atụ aro ya maka eriri polyester (eriri PET, terylene), enwere ike iji ya rụọ ọrụ plastik, ma jikọta ya na carbon ojii na-acha anụnụ anụnụ phthalocyanine. A na-ejikarị ya eme ihe na PS ABS SAN PMMA PC PET ABS polyolefin, polyester, polycabonate, polyamide, Plastics.
Okike ya bụ Filester BA, Terasil Violet BL.
123456 Osote> >> Peeji 1/26
Ekwentị ： +86 574 88139027
Adreesị ： Obodo Tuqiao, Zhonghe Street, Yinzhou, Ningbo, China
Copyright - 2018-2020: All Rights echekwabara.